Doorashadii Xildhibaanka beesha Duduble (Maxamed Camal) – GMDQ
Doorashadii Xildhibaanka beesha Duduble (Maxamed Camal)
Waxaa ka qabsoomey magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug buuxinta mid ka mid ah kuraasta ka bannaan Golaha shacabka.
Taariikhdu makrey aheyd 15/04/2018 waxaa qabsoomey tartanka doorasho ee kursiga beesha Duduble, Jufada Maxamed Camal, waxaana kursigaasi ku tartamaayey sedax musharax oo kala ah Cabdulaahi Faarax Wehliye, Cabdule Faarax Xersi iyo Maxamed Cilmi Afrax.
Goobta doorashadu ay ka socotey waxaa goobjoog ka ahaa, isla markaana la socdey habka ay u socdaan doorashada qeybaha kala duwan ee Bulshada sida Haweenka, Dhalinyarada, Culumaudiinka, Siyaasiyiinta Gobolka, warfideynta (Media) ergada, wakiilada Musharaxiinta, korjoogto, Xubnaha Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo kala ahaa Saciid Xaashi Warsame iyo Maxamed Dahir.
Inta ay socotey doorashada waxaa amniga goobta sugayey ciidamada Ammaanka ee Maamulka Galmudug.
Furitaanka Goobta doorashada waxaa hadalo ku aadan nidaamka doorasho ka soo jeedisey Gudoomiyaha Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka marwo Xaliimo Ismacil Ibrahim, Xaliimo waxay sheegtey in ujeedada ay u qabanayaan doorashadan ay tahay codsi kaga yimid madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, sidoo kale waxay sheegtey Gudoomiyaha in howlaha doorashada ay ka yihiin dhexdhexaad,marnaba aysan isku dayin inay u eexato musharax, waxayna u sheegtey warbaahinta iyo korjoogtaduba inay marqaati ka ahaadaan habka doorasho ay u dhacayso.
Sidoo kale waxaa ka Hadley goobta doorashada Ugaas Saciid Ugaas Maxamed oo cadeeyey in ergada ay yihiin ergadii saxda ahaa oo ay leedahay beesha Maxamed Camal ee Duduble, wuxuuna mahad gaar ah u soo jeediyey Guddiga oo u istaagey inay qabtaan doorashada kursiga ka bannaanaa golaha shacabka ee uu baneeyey marxuum Bootaan Ciise Caalin.
Musharaxiinta tartamayay ayaa iyaguna ka hadlay goobta. Ugu horeyn waxaa ka Hadley musharax Cabdulaahi Faarax Wehliye oo sheegay inuu dadkiisa u qaban doono waxqabad wanaagsan, degaanka ay ku nool yihiina ka xoreyn doono Alshabaab.
Musharax Cabdule Faarax Xersi ayaa isna sheegay in dhalinyarada uu hormarin doono, uuna yahay muwaadin Soomaaliyeed, balse hadey codkooda siiyaan ergada uu wax badan oo horumar ah u qaban doono.
Maxamed Cilmi Afrax ayaa isagana u balanqaadey Ergada hadey codkooda siiyaan inay mideyn doono beesha uu matalo, dhanka amniga iyo dhaqaalahana uu ka hormarin doono.
Tartanka doorasho ee kursiga Maxamed Camal ee Duduble markii ay soo dhamaadeen waxaa bilowdey tirinta codadka, waxaana natiijada codadka ku dhawaaqdey Gudoomiyaha GMDQ marwo Xaliimo Yareey oo sheegytey in Cabdulaahi Faarax Wehliye uu ku guuleystey codad dhan 28 cod ,Cabdule Faarax Xersi uu helay 3 cod, Maxamed Cilmi Afrax 17 cod.
Waxaana ku guuleystey kursiga Xildhibaannimo ee Golaha Shacabka Cabdulaahi Faarax wehliye oo helay 28 cod.
Kulanka shaacinta natiijada ka dib waxaa goobta doorashada ka Hadley muhraxii guuleystey iyo kuwa laga guuleystay oo wada cadeeyey in doorashadu u dhacday si dhexdhexaad ah, cadaalad ayna ka fogeyd eex ama nin jecleysi. Mushraxa guuleystey oo noqdey xildhibaan qaran ayaa ergada u sheegay inay wada shaqeyn doonaan.
Xeritaanka kulanka doorasho waxaa ka Hadley Madaxa Xakuumada Galmudug Dr Sheekh Shaakir Cali Xasan oo u mahadceliyey Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka oo muujiyey dadaal dheeri ah iyo waxqabad dhab ah, wuxuu kaloo u mahadceliyey maamulka Galmudug iyo weliba dadkooda, in maanta ay tahay maalin taariikhi ah, doorashadani ay tahay doorashadii kursi gole shacab ee dowlad federal ah ugu horeesey ee lagu qabtey Dhuusamareeb. Wuxuuna sidoo kale u mahadceliyey xildhibaanadka Guuleestey iyo musharaxiinta iyagu waayey codadka.
GMDQ waxay horey u soo qabteen sedax kursi ee ka Bannaanaa Golaha shacabka oo ay ka soo kala qabteen Maamulada Hirshabele, kursiga Cali Madaxweyne, Xawaadle, Jubaland, Kursiga Hubeer Iyo Muqdisho oo lagu qabtey Kursiga Geda Buursi, Habar Carfaan.
Ujeedada Guddiga ayaa ah in dalka ay gaarsiiyaan doorasho cod iyo qof, balse doorashadani ayaa ah doorasho ay ka codsadeen inay qabtaan maamul goboleedyada iyo dowlada dhexe ee Somaliya.
Waxaa la faafiyey April 17, 2018 August 16, 2018